Yimiphi imingcele emibili ejwayelekile yezobuchwepheshe yokuboniswa kwe-LCD?
1. Qhathanisa I-IC yokulawula esetshenziselwa ukwenziwa kwezikrini ze-LCD 、 Izesekeli ezinjengezihlungi namafilimu wokuma, Ihlobene nokuphikisana kwephaneli, Kubasebenzisi abajwayelekile, Isilinganiselo sokuqhathanisa esingu-350: 1 sanele, Nokho, umehluko onjalo emkhakheni wobuchwepheshe awukwazi ukuhlangabezana nezidingo zabasebenzisi. C ...
Kungani i-OLED iphilile kune-LCD.
Ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka okuncane, ukuboniswa kombala kwe-OLED kukhululeke kakhulu emehlweni abantu nezinye izinto zenza i-OLED ibe nempilo kune-LCD. Abangani abavame ukuvakashela iSiteshi B bavame ukuzwa lo musho: Barrage Eye Protection! Eqinisweni, ngifuna ukufaka i-Buff yokuvikela iso kimi, Udinga kuphela umakhalekhukhwini noma i-TV ...
Thinta iphaneli lefektri iNissha inyuka umkhawulo wansuku zonke! Umthelela walolu bhubhane ulinganiselwe, futhi isibikezelo semali etholwa yi-H1 sizokhuphuka
Umthelela wenoveli coronavirus pneumonia (i-COVID-19, eyaziwa kakhulu njenge-new coronary pneumonia) isifo esilinganiselwe, uNissha, umkhiqizi omkhulu wepaneli yokuthinta, uphenduke ngempumelelo kusuka ekulahlekelweni kwaba yinzuzo kwikota edlule. Futhi uphakamise isibikezelo sombiko wezezimali walo nyaka we-H1, Khuthaza ...
isungule isikrini esibonakalayo esingasetshenziswa ngaphandle kokuxhumana
ithuthukise isikrini sokuthinta esingathintani esibonakalayo esingabona olunye uhlangothi lwesikrini, Vele uvuse umunwe wakho, Asikho isidingo sokuthinta isikrini ukusebenza.Ngokusakazeka komqedazwe omusha womqhele, Kulindeleke ukuthi ushumekwe ku-anti -spray partitions efakwe kuma-checkout counters ezitolo ....
I-Low Temperature Poly-silicon (i-LTPS) ekuqaleni kwakuyinkampani yezobuchwepheshe eNyakatho Melika eJapan ukunciphisa ukusetshenziswa kwamandla kwezikhangiso ze-Note-PC, Ubuchwepheshe buthuthukiswe ukwenza i-Note-PC ibonakale izacile futhi ilula, Cishe maphakathi nawo-1990, lobu buchwepheshe iqale ukungena esigabeni sesivivinyo.
Isikrini sokubonisa siyinto ejwayelekile kakhulu futhi ebalulekile empilweni yethu yansuku zonke.Isikrini sokubonisa sisikhombisa zonke izinhlobo zolwazi ngesikrini, Masithole ulwazi oluningi kuyo.Ngokuya ngezinto ezahlukene nobuchwepheshe, Ingahlukaniswa nge-CRT isibonisi, isibonisi sePlasma
Ihlukaniswe kanjani imithethonqubo ye-LCD A no-B?
Ngokuya ngekhwalithi yepaneli ye-LCD, ingahlukaniswa ngezigaba ezintathu: A, B no-C, Isisekelo sokuhlukaniswa inombolo yamaphikseli afile. Kepha ayikho imithethonqubo efanelekile futhi esheshayo emhlabeni, ngakho-ke, amazinga wokubekwa wamazwe ahlukile awafani. thina ...
Ungazithola Kanjani Izinto Ezihamba Phambili Zikagesi
Ukuhlwaya izinto ezinhle kubalulekile. Okokuqala, udinga ukwazi ukuthi izingxenye zihlukaniswe ngezinhlobo ezimbili eziyinhloko - ukwenziwa nokusebenzayo. Izinto ezenziwayo: Ama-Resistors, ama-Capacitors, ama-Inductance Izakhi ze-elekthronikhi zihlukaniswa njengezisebenza noma zingenzi lutho kuze kube yimisebenzi. Ngamafuphi, i ...
Surface Mount Technology & SMT Amadivayisi
Ubuchwepheshe be-Surface mount, i-SMT nedivayisi yayo ehambisana nayo, ama-SMD asheshisa kakhulu umhlangano we-PCB njengoba izingxenye zimane zenyuka ebhodini. Bheka ngaphakathi kwanoma iyiphi into eyenziwe ngogesi kulezi zinsuku futhi igcwele amadivayisi amaminithi. Esikhundleni sokusebenzisa isiko ...
Izinga lokuthengisa lomkhakha wamaphaneli womhlaba jikelele ngekota yesithathu ka-2020
Abaxhumanisi be-Display Supply Chain （DSCC report Umbiko okhishwe muva nje uthe, Ukuthengiswa komkhakha wepaneli kwikota yesithathu yonyaka we-2020 kufinyelele ezingeni eliphezulu kakhulu kusukela kwikota yesine yonyaka wezi-2017 ， Ku- $ 30.5 billion, Ukwanda ngama-21% kusuka kwikota eyedlule , Ukwanda konyaka nonyaka ngama-11%. ...
Ubuchwepheshe bokubona iminwe ngaphansi kwesikrini se-TFT FoD buyaqala
Izinga lokungena lokungena kweminwe ngaphansi kwesikrini selikhuphukile, inselelo ngama-30% ngokushesha nje lapho i-2021 Kunezibikezelo ze-ejensi, Ubuchwepheshe bokuqashelwa kwezigxivizo zeminwe ngaphansi kwesikrini bethulwe ngonyaka we-2018, Kulindeleke ukuthi ubuchwepheshe obuningi obungenzeka bufakwe ku-pro. ..
Ngonyaka ozayo ama-86% we-LCD TV panel supply azodliwa yiwo!
Abacwaningi bezimakethe i-Omdia bakhiphe imininingwane yakamuva, Kulinganiselwa ukuthi ukuthunyelwa kwephaneli ye-LCD TV kuzoba yizigidi ezingama-256 ngonyaka ka-2021. 6% unyaka nonyaka, Kodwa umthamo wokuthengwa kwamafektri omkhiqizo we-TV aphezulu ayi-10 ukhule kakhulu wafinyelela kuma-86%. ， Ngonyaka olandelayo, kungadala impi yezinsizakusebenza zepaneli ye-TV ....